” လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်တွင် ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်တိုင်းကျ ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ( 1 ) ယောက် ကို ဝယ်ယူမယ်လို့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား ကတိပေး “ – Sport Gaber
ယူနိုက္တက္အသင္း နည္းျပဆိုးရွား သည္ လာမယ့္ရာသီမွာပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုကိုစိန္ေခၚနိုင္စြမ္းရွိေစဘို့. လာမယ့္ ေနြရာသီ အေျပာင္းအေရြ့ ေစ်းကြက္တြင္ ပရိတ္သတ္ေတြ စိတ္တိုင္းက် ျကယ္ပြင့္ ကစားသမား ( 1 ) ေယာက္ ကို ဝယ္ယူမယ္လို့ ကတိေပးခဲ့တာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
ယူနိုက္တက္အသင္းဟာ လက္ရွိရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံမန္စီးတီးေနာက္ 12 မွတ္ေလ်ာ့နည္းကာဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီးရာသီေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္အျဖစ္ဝုဒ္ နဲ့ကစားရမွာျဖစ္ပါ တယ္ ။
ယူနိုက္တက္အသင္း သည္ လာမယ့္ ေနြရာသီ အေျပာင္းအေရြ့ ေစ်းကြက္တြင္ ကစားသမား တြေခၚယူနိုင္ဖို႔စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။အသင္းေျခစြမ္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္အသင္းအေနနဲ႔ ကစားသမားေတြထပ္ေခၚယူရမယ္လို႔နည္းျပဆိုးလ္ရွားကယုံၾကည္ေနပါတယ္။
နည္းျပဆိုးလ္ရွားက လုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုပုံမွန္အတိုင္းစီစဥ္ေနတယ္။အသင္းရဲ့အေျပာင္းအေရႊ႕အစီအစဥ္ေတြကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ လာမယ့္ ေနြရာသီ အေျပာင္းအေရြ့ ေစ်းကြက္တြင္ အသင္းအင္အားေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။
အသင္း ေျပာင္းေရြ့လိုတဲ့ကစားသမားေတြရွိေနသလိုအသင္းမွာဆက္ရွိေနလိုတဲ့ကစားသမားေတြရွိေနတယ္။အသင္းအင္အားေတာင္တင္းေစဖို႔ကစားသမားအခ်ိဳ႕ထပ္မံေခၚယူရမယ္။ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုစိန္ေခၚနိုင္ဖို႔ကစားသမား2ေယာက္3ေယာက္ ေလာက္ ထပ္မံေခၚယူရမယ္။“လို႔ေျပာပါတယ္။
ယူနိုက်တက်အသင်း နည်းပြဆိုးရှား သည် လာမယ့်ရာသီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိစေဘို့. လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်တွင် ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်တိုင်းကျ ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ( 1 ) ယောက် ကို ဝယ်ယူမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လက်ရှိရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံမန်စီးတီးနောက် 12 မှတ်လျော့နည်းကာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပြီးရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဝုဒ် နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါ တယ် ။
ယူနိုက်တက်အသင်း သည် လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်တွင် ကစားသမား တွခေါ်ယူနိုင်ဖို့စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါ တယ်။အသင်းခြေစွမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်အသင်းအနေနဲ့ ကစားသမားတွေထပ်ခေါ်ယူရမယ်လို့နည်းပြဆိုးလ်ရှားကယုံကြည်နေပါတယ်။
နည်းပြဆိုးလ်ရှားက လုပ်ဆောင်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းစီစဉ်နေတယ်။အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်တွင် အသင်းအင်အားတောင့်တင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်။
အသင်း ပြောင်းရွေ့လိုတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေသလိုအသင်းမှာဆက်ရှိနေလိုတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေတယ်။အသင်းအင်အားတောင်တင်းစေဖို့ကစားသမားအချို့ထပ်မံခေါ်ယူရမယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ကစားသမား2ယောက်3ယောက် လောက် ထပ်မံခေါ်ယူရမယ်။“လို့ပြောပါတယ်။